Siihayaha Wasiirka Caafimaadka oo la kulmay hay’ado ka socda Qaramada Midoobay – Radio Muqdisho
Siihayaha Wasiirka Caafimaadka oo la kulmay hay’ado ka socda Qaramada Midoobay
Siihayaha Wasiirka Caafimaadka ee Soomaaliya mudane Cali Maxamed Maxamuud ayaa maanta kulan la qaatay Madax ka socotay hay’adaha Qaramada Midoobay ee dhanka Caafimaadka, iyado kulanka ay goob joog ka ahaayeen Wasiirada Caafimaadka ee Maamulada Jubaland iyo Galmudug.
Shirka ayaa waxaa looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay sanadkan sii dhamaanaya Wasaaradda caafimaadka iyo caqabadaha horyimid, si loohelo qorshe ku aadan horumarinta adeegyada caafimaadka ee sanadka cusub.
Wasiirada maamulada kulanka ka qeyb galay oo goobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay in deegaannada maamuladaasi aysan ka jirin adeegyo caafimaad oo dhameystiran, waxaana ay intaa ku dareen in shirkan uu ahmiyag gaar ah siinayo sida lagu xalin karo caqabadaha sanadkan Wasaaradda ho yimid, ayna codsanayaan in Wasaaraddu ay gacan ku siiso horumarinta caafimaadka aas aasiga ah ee deegaannadooda.
Ugu dambeyntii Wasiirka caafimaadka Cali Maxamed Maxamuud “Cali Xareed’ ayaa tilmaamay in Wasaaraddu ay dadaal ugu jirto sidii muwiidiniinta Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo dhameystiran, isagoo intaa ku daray inay qorsheynayaan sidii xarunta Wasaaradda Caafimaadka dib u dhis loogu sameyn lahaa.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo kaashaneysa hay’adaha caafimaadka ee Qaramada Midoobay ayaa dadaal ugu jirto sidii ay u diyaarin lahayd qorshe caafimaad oo tayaysan sanadaha soo socda.